Cuntooyinka ay Birtu ku Badan Tahay
Subject: Cuntooyinka ay Birtu ku Badan Tahay Sun Sep 12, 2010 4:07 am
salamu calykum waraxamtulaahi wabarakaatuh
dhamaan xubnaha iyo maamulka shabakada waxaan leeyahay ciid wanaagsan
waxaa i farax galinaya inaan walaalaha kala qeeb qaato qeebtaan maqaalooyin zaaid u muhiim ah oo caafimaadka ku saasbsan asigoo maqaalkeeda ugu horeeyo noqonaayo:-
Iron ama bir ama feero waa nafaqo lagama maarmaan u ah dhismaha iyo helidda dhiig caafimaad leh.
Quudka muhiim ayey u tahay maxaa yeelay waxay door ka cayaartaa sameynta hemoglobin, qayb ka mid ah unugga dhiigga guduudan, ee jirka siiya ogsijiinta. Haddii kaydkaaga birtu hooseeyo, waxa laga yaabaa inaad dareentid daal badan oo aad arag dillaatid sidii qof bukka oo kale.
Aad isbitaalka haddii aad u maleynaysid in kaydkaaga birtu hooseeyo.
Cuntooyinka Birta ama Feerada Qaniga ku ah:
■ Hilibka: Hilibka lo'da caatada ah, digaagga maqaarka leh, shellfish, kalluunka, beerka, hilibka xubinta
■ Jaallaha ukunta: Aad ayey kolestaroolka ugu sarreysaa waana in aan la isticmaalin haddii ay tahay inaad qaadato quud kolestaroolkiisu hooseeyo
■ Digirta la engejiyey, digirta kala dhanbalan iyo digirta cagaaran
■ Khudradda caleenta cagaaran sida bagalka iyo ansalaatada
■ Furutada la engejiyey sida sabiibka iyo ananaaska
■ Naatiska iyo dufanka looska
■ Miraha sida siiriyaalka birta lagu xoojiyey, rootiga feerada lagu daray, rootiyada mirihii oo la isku wada shiiday ah
Jirkaagu wuxuu birta ama feerada cuntooyinka xoolaha uga soo nuugaa si ka fudud cuntooyinka geedaha. Si aad jirkaaga ugu caawiso inuu birta ka soo nuugo geedaha, cuntada ku darso Fitamiin C. Waxyaabaha Fitamiin C laga helo waxaa ka mid ah: furutada ama casiirka burtuqaalka, yaanyada, qaraha, istarowbari, khudradda iyo furutada inta badan midabkoodu xooggan yahay.
Cuntooyin ka dooro dhammaan kooxaha cuntooyinka kuna darso cunno birtu ama feeradu ku sarreyso ugu yaraan hal mar maalintiiba.
waad ku mahad santhay aqriskaada walaal
salaamu calayku waraxmatulaahi wabarkaatuh
Subject: Re: Cuntooyinka ay Birtu ku Badan Tahay Wed Sep 22, 2010 3:14 am
mahad sanid diktoor